Published by ecdadmin on Thu, 10/10/2019 - 05:36
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထား မှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၁
Published by ecdadmin on Thu, 10/10/2019 - 05:15
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များအပေါ် လူမှုပတ်ဝန်းက
Workshop on Regulatory Environment and Investment Case for Coastal Landscape Mangrove Restoration in Myanmar (Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw, 9-10-2019)
Published by ecdadmin on Wed, 10/09/2019 - 12:53
GGGI in collaboration with the Forest Department organizedaworkshop on “Regulatory Environment and Investment Case for Coastal Landscape Mangrove Restoration in Myanmar” on9October at Park Royal Hotel in Nay Pyi Taw. The objective of this workshop was to get stakeholder inputs on the identification of environmentally sustainable and socially inclusive models for mangrove restoration.
Read more about Workshop on Regulatory Environment and Investment Case for Coastal Landscape Mangrove Restoration in Myanmar (Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw, 9-10-2019)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီယမ်ရိမြို့ (Siem Reap) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment – 15th AMME and Related Meetings) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေမှု အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူသွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
Published by ecdadmin on Mon, 10/07/2019 - 10:08
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီယမ်ရိမြို့ (Siem Reap) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment – 15th AMME and Related Meetings) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်
Read more about ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီယမ်ရိမြို့ (Siem Reap) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment – 15th AMME and Related Meetings) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေမှု အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူသွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ရခိုင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် Block A-3 တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (Exploration Drilling)၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (Environmental Impact Assessment) အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှ
Read more about ရခိုင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် Block A-3 တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (Exploration Drilling) အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (Environmental Impact Assessment) အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
၁။ Total Victory International Co.,ltd မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်သုံးပစ္စည်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာန ၊ဦးစီးရုံးချုပ် (နေပြည်တော်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ နေ့လယ် ၁:၃၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးနှင့်စံချိန်စံည
Read more about Total Victory International Co.,ltd မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်‌တော်၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်သုံးပစ္စည်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲ
Nanova Co., Ltd မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၊ နေပြည်တော် ၌ Mercury Analyzer နှင့်ပတ်သက်၍ Product Presentation and Workshop
Published by ecdadmin on Wed, 09/25/2019 - 13:44
၁။ Nanova Co., Ltd မှ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး Mercury Analyzer နှင့်ပတ်သက်၍ Product Presentation and Workshop ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ် (နေပြည်တော်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ယနေ့နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသ
Read more about Nanova Co., Ltd မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၊ နေပြည်တော် ၌ Mercury Analyzer နှင့်ပတ်သက်၍ Product Presentation and Workshop
Published by ecdadmin on Wed, 09/25/2019 - 05:27
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အပေါ် လူမှုပတ်ဝန်းကျင
အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း
Published by ecdadmin on Wed, 09/11/2019 - 09:50
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉) ကို ၁၃-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ်(၂၇/၂၀၁၉)ဖြင့် အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ၏ အခြေခံမူများကို အခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ မဟာဗျူဟာမူဘောင် အပြီးသတ်မူကြမ်း ရေးဆွဲပြီးဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆ
Read more about အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည့် (၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်) တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
Published by ecdadmin on Fri, 09/06/2019 - 10:19
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မည့် (၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်) တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
Read more about ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည့် (၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်) တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး